Wasiir Beyle oo digniin u diray shaqaalaha dowladda | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Wasiir Beyle oo digniin u diray shaqaalaha dowladda
Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya C/raxmaan Ducaale Beyle ayaa digniin u diray shaqaalaha dowladda ee aan soo xaadirin shaqo maalmeedkooda.
Wasiir Beyle ayaa sheegay in aan wax mushaar ah aan la siin doonin shaqaalaha aan soo xaadirin shaqadooda.
Dr. Beyle ayaa tilmaamay in qofka xaqa u leh mushaarka uu yahay kan u shaqeeya dowladda ee soo xaadira waqtigii loogu tala galay.
“Qofka aan soo xaadirin shaqadiisa wax mushaar ah ma qaadanayo, qofka xaqa u leh mushaarka waa kan shaqadiisa yimaada waqtigii loogu tala galay, kuna baxa isla waqtigii ay shaqada ku egtahay”ayuu yiri Wasiir Beyle.
Wasiirka ayaa sheegay inay dhamaatay waqtigii dadka aan shaqeyn iyagoo guryahooda jooga mushaarka iska qaadan jireen, waxa auu kaloo sheegay inay jiraan dad dowladda shaqaale ahaan ugu qoran, balse meelo kale ka shaqeysta.
“Hadda kaddib qofka aan shaqeyn ee mushaarka aan la siin doonin, waxba yuusan ku soo war wareegin inuu Xildhibaan soo kaxeysto, qofkaas mushaar ma qaadan doono, haddii uusan si sax ah u shaqeyneyn”ayuu yiri Wasiir Beyle.
Dowladda Soomaaliya ayaa bilihii u dambeeyay waday dib u habeyn iyo tirakoob lagu sameynayay shaqaalaha dowladda, waxaana dowladdan ku guuleysatay in shaqaalaha rayidka ay si joogto ah bil walba u qaataan mushaarkooda..